Hetsika Tanora Antsirabe :1500 no nahazo fanampiana | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Hetsika Tanora Antsirabe :1500 no nahazo fanampiana
Vary fotsy 1500 kilao no nozaraina tamin’ireo mpiara-mitolona tao Antsirabe ny sabotsy 18 aogositra lasa teo. Tao amin’ny Kianjan’ny Magro Avaratsena Antsirabe no nanatanterahana ny hetsika nokarakarain’ireo tanora avy ao amin’ny renivohitr’i Vakinankaratra izay manohana ny Filoha RAVALOMANANA Marc sady mitaky ny fiverenany eto an-tanindrazana.
Fitsinjovana ny fiaraha-monina sy ny sosialy any an-toerana no tena tanjon’izy ireo mba hanamaivanana ny fahasahiranana indrindra amin’izao fahantrana efa mandindona ny isan-tokantrano izao. Araka ny fampitam-baovao dia tsy hanin-kahavoky akory ny vary fotsy iray kilao isan’olona saingy mahavita izay vitany amin’ny fahasarotan’ny vidim-piainana izay efa iaraha-mizaka amin’izao fotoana. Araka ny fantatra dia nanolo-tanana ny Hetsika Tanora Antsirabe ihany koa ny Gasy Tia Tanindrazana izay ivondronan’ireo mpiray tanindrazana mila ravi-nahitra any ampitan-dranomasina any. Nisy ihany koa ny fanolorana sarin’ny Filoha RAVALOMANANA ho an’ny mpiara-mitolona eo amin’ny Magro Avaratsena ho fampahatsiahivana ny soa vitany teto amin’ny Firenena sy ny antom-pisian’ny tolona hamerenana ny ara-dalàna hatramin’ny 2009 no mankaty.